08/11/13 ~ Myanmar Forward
သားသမီး မရှိခြင်းကို စိတ်ပျက်စရာဟုမထင်ကြောင်း အနစ္စတန် ပြောကြား
Posted by drmyochit Sunday, August 11, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဂျန်ီဖာ အနစ္စတန်က သူမအနေဖြင့် သားသမီး မရှိခြင်းကို စိတ်ပျက်စရာဟု လုံးဝ မယူဆကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်သည်။ ယခင်က ဟောလီးဝုဒ် နာမည်ကျော်မင်းသား ဘရတ်ပစ်တ်နှင့် အိမ်ထောင်ကျဖူးသလို လတ်တလောတွင် မင်းသား ဂျက်စတင် သောရက်စ်နှင့် စေ့စပ်ထားသည့်တိုင် အနစ္စတန် အနေဖြင့် ကလေးယူရန် လုံးဝ မစဉ်းစားသေးချေ။ သူမအသက်သည် (၄၄)နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မိသားစု တစ်ခုကို သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ထူထောင်ရန် အချိန်အခါ သင့်နေပြီဟု ဝေဖန် အကြံပြုမှုများ ရှိနေသော်လည်း အနစ္စတန် ကိုယ်တိုင်ကမူ ကလေးမရှိသည့်အတွက် မည်သည့်အခါကမျှ နောင်တမရခဲ့ကြောင်း တုံ့ပြန်သွားသည်။
We're the Millers စတား မင်းသမီးက "ကျွန်မဘဝမှာ အံ့ဩစရာ အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်။ အံ့ဩစရာ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ ရှိတယ်။ သိပ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ ချစ်သူလည်းရှိတယ်။ လှပတဲ့ ခွေးလေးတွေလည်း မွေးထားတယ်။ သူတို့ရှိနေတာ ဆူဆူညံညံနဲ့ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ပြောချင်တာက ကျွန်မအတွက် ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့ သူတိုင်းက ချိုသာပြီး ကျေနပ်စရာတွေချည်းပဲ"ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမက မိသားစုဆိုသော အသုံးအနှုန်းသည် သားသမီးယူခြင်းနှင့် မဆိုင်ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
"ကောင်းပြီ။ မိသားစုဆိုတာကို ကျွန်မဖာသာ အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်မယ်။ ကျွန်မအတွက် မိသားစုဆိုတာကို ကျွန်မဖာသာ ရွေးချယ်မယ်။ ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရယ်၊ ကျွန်မချစ်သူရယ်က ကျွန်အတွက် စစ်မှန်တဲ့ မိသားစုပဲ"ဟုလည်း အနစ္စတန်က ပြောဆိုခဲ့သေးသည်။ သူမက ကလေးယူမယူ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး "ကလေးဘယ်လောက် မွေးမလဲဆိုတာ ကျွန်မ တွေးရမလား။ ယောက်ျားလေးလား၊ မိန်းကလေးလား။ ပြောရရင် ကျွန်မ ဒီကိစ္စကို အလေးအနက်ကို မစဉ်းစားဖူးဘူး။ ကျွန်မဘဝအတွက် ဒါဟာ မောင်းနှင်အားတစ်ခု ဖြစ်ပါ့မလားလို့ကို မတွေးမိတာ။ ဒါက ကျွန်မ ရိုးရိုးသားသား ပြောတာပါ"ဟုလည်း ဖြေကြားသွားသည်။
ကားမောင်းစဉ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ပြောဆိုမှုနှင့် ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှု ဆက်နွှယ်မှု မရှိကြောင်း သုတေသီများ တွေ့ရှိ
အမေရိကန် နိုင်ငံမှ ယာဉ်မောင်းများသည် ကားမောင်းနေစဉ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြုခြင်းနှင့် ယာဉ် မတော် တဆ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း မြင့်မားခြင်းသည် ဆက်နွှယ်မှု မရှိကြောင်း သုတေသန ပညာရှင်များက တွေ့ရှိ ခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၁ဝ ရက် အင်တာနက် သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။
ကာနီဂီမယ်လ်လွန် တက္ကသိုလ်နှင့် လန်ဒန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်တို့မှ သုတေသန အဖွဲ့သည် အမေရိ ကန် ပြည်ထောင်စု ပြည်နယ် ရှစ်ခုတွင် ယာဉ်တိုက်မှုနှင့် အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးမှုပေါင်း ရှစ်သန်း ကျော်နှင့် ည ၉ နာရီ မတိုင်မီနှင့် နောက်ပိုင်း အချိန်များတွင် ဖုန်းအသုံးပြုမှု အချက်အလက် များကို သုံးနှစ်ကျော် လေ့လာ ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၄င်းတို့ လေ့လာမှု ပြုထားသော ရလဒ်များတွင် မက်ဆေ့ခ်ျ ပေးပို့ခြင်းနှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်းများ မပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ အမေရိကန် မိုဘိုင်းလ် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများသည် ည ကိုးနာရီ နောက်ပိုင်း အချိန်တွင် ဖုန်းပြောဆိုခအား အလကား သတ်မှတ် ပေးထားသည့် အတွက် ထိုအချိန်တွင် ဖုန်းပြောဆိုသူ များပြားလျက် ရှိသော်လည်း ကားမောင်းစဉ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ပြောဆိုမှုနှင့် ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုတို့မှာ ဆက်နွယ်မှု မရှိသည်ကို အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါ သုတေသနအဖွဲ့မှ ပါမောက္ခ ဆောရပ်ဘာဂါဗာနှင့်ဒေါက်တာ ဗီကရမ်ပါသာနီးယားတို့က ပြောကြား ခဲ့ကြသည်။
Posted by drmyochit Sunday, August 11, 2013, under သတင်းများ | 1 comment
အခန်းတံခါး ပိတ်ပြီး အခန်းထဲမှာ အရက် စုသောက်ကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေထဲမှာ အရက် နည်းနည်း လောက် သောက်ပြီးရင် သွေးဆူ တတ်တဲ့ အလုပ်သမား တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ထိုသူက အလုပ်သမားအားလုံး နှစ်ပတ်တိတိ အလုပ်ပြုတ်ရတဲ့ တရားခံ အလုပ်သမားပါ။ တရုတ်သင်္ချိုင်း ကလေးအုတ်ဂူပေါ်က ကစားစရာ မော်တော်ကားလေး ကို ယူလာတာ လည်း သူပါပဲ။ အလုပ်ခဏ ပြုတ်လို့ အရက်သောက်လိုက် တီဗွီကြည့်
လိုက်လုပ်နေကြတဲ့ ညတညမှာ ကလေး ကစားစရာကို သင်္ချိုင်းက ယူလာ တဲ့ အလုပ် သမားက အရက်သောက်ပြီး အရက်ဝိုင်း နံဘေးမှာ အိပ်ပျော်သွား ပါတယ်။ အရက်သောက် နေကြတဲ့ အလုပ် သမားတွေဟာ အရက်သောက် နေရင်း စကားသံကို ကျယ်ကျယ် မပြောရဲပါဘူး။ နံဘေးအခန်းတွေက သူတို့ရဲ့ ဆူညံမှုကို ရဲစခန်းဆီ ဖုန်းဆက် တိုင်ကြားရင် သူတို့အားလုံး တရားမ၀င် အလုပ်သမားဖြစ်နေတာကို ရဲက သိသွားမှာ စိုးလို့ပါ။
ဒီလိုနဲ့ နည်းနည်း ညဥ့်နက်လာချိန်မှာ အရက်ဝိုင်းနံဘေး အိပ်ပျော်နေတဲ့ အလုပ်သမားက နိုးလာ ပါတယ်။ ပြီးတော့ အိပ်ချင်မူး တူးနဲ့ အရက်တွေ ကို တစ်ခွက်ပြီး တစ်ခွက် ယူသောက် ပါတယ်။ ထို့နောက် အရက်ဝိုင်း ထဲက အခြားအလုပ်သမားတွေကို စကားသံ ဗလုံဗထွေးနဲ့ ယစ်ပါတော့ တယ်။ အဲဒါနဲ့လည်း မပြီးသေးပါဘူး၊ အိပ်ခန်းထဲက အိပ်ပျော် နေတဲ့ သူတွေကို ဇွတ်အတင်းနိုးပြီး ယစ်ပါသေးတယ်။ ပထမတော့ အားလုံးက သူ့ကို မူးပြီး မယစ်ဖို့ ၀ိုင်းပြီး တောင်းပန်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုလိုပြောပြော ပြောလို့ မရခဲ့ပါဘူး။ အမူး လွန်နေတဲ့ သူက နောက်ဆုံးမှာ နောက်ဖေး မီးဖို ချောင်ထဲက အသားလှီး ဓါးကို ယူပြီး အားလုံးကို ခုတ်မယ် ထစ်မယ် တကဲကဲ လုပ်ပါတော့တယ်။ အသံတွေဟာ တစထက် တစ ပိုဆူညံလာပြီး ထိန်းမရအောင် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ အဲဒီအခန်းထဲက အလုပ်သမားအားလုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
မူးပြီး ယစ်နေတဲ့ အလုပ်သမားကို သတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ သေသူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင် ခုတ်ထစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အပိုင်းပိုင်း ဖြစ်အောင် ခုတ်ထစ်တဲ့ နေရာမှာ အခန်းရဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ တင်ပြီး ခုတ်ထစ် ရင် ဓါးမ’ကြောင့် ခုတ်သံတွေ ထွက်ပေါ် လာလို့ အောက်ခန်းက လူတွေ သိသွားမှာကို သူတို့ စိုးရိမ်းကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူသေ အလောင်းကို ဟိုဖက်တစ်ယောက် ဒီဖက်တစ်ယောက် အမြင့်မှာ မြှောက်ပြီး ခုတ်ထစ် ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို အမှိုက် ပြစ်ရာ အသုံးပြုတဲ့ အိတ်အမဲရောင်တွေနဲ့ နှစ်ထပ် သုံးထပ် သေသေချာချာ ထုတ်ပိုး ပါတယ်။ မနက် မိုးမလင်းခင် ဝေလီဝေလင်းမှာ လူသေအစိတ်အပိုင်းများ ထည့် ထား တဲ့ အိတ် အမဲ တွေကို သူတို့ နေထိုင်ရာ တိုက်အမြင့်ကြီး၏ အမှိုက်ပြစ်ရာတွင် အသုံးပြုသော *ဂလိုင်ပေါက်မှ တဆင့် ပြစ်ချ ခဲ့ကြပါတယ်။
(*ဂလိုင်ပေါက်= ကန်ထရိုက်တိုက်အပေါ်ထပ်တွင် နေထိုင်သူများအနေဖြင့် အမှိုက်ထုပ် များကို စွန့်ပြစ်ရာတွင် တိုက်အောက်ခြေသို့ဆင်းစရာ မလိုပဲ အလွှာတိုင်းတွင် ရှိသော အမှိုက်ပြစ်နိုင်သည့် အပေါက်တစ်ခု။)
အသတ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမား မိသားစုဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းက ကျေးရွာလေး တစ်ခုကပါ။ ဇနီးသည်နဲ့ သားသမီးငယ်သုံးဦး တို့ဟာအဲဒီသတင်းကို ချက်ချင်း မသိရှိ ခဲ့ကြပါဘူး။ သေဆုံးသွားသူရဲ့ ကလေးငယ်များဟာ ညစဉ်လိုလို အိမ်မက်ဆိုးတွေ မက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ကစားစရာ မော်တော်ကားလေး တစ်ခုကို လက်တစ် ဖက်မှာ ကိုင်ဆောင်ထားသလို အခြားလက်တစ်ဖက်မှာလည်းအသားဖြူဖြူ ကလေးငယ် တစ်ဦး လက်ဆွဲပြီး သူတို့အိမ် အပေါက်ဝမှာ မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ ရောက်လာတယ်လို့ အိမ်မက် မက်ကြပါတယ်။
အသတ်ခံရသူဟာ နှစ်လ တစ်ကြိမ် အိမ်ကို ပိုက်ဆံပို့တဲ့ အခါတိုင်းသူ့မိသားစုထံ ဖုန်းဆက် လေ့ ရှိပါတယ်။ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုလည်းလကုန်ရင် တယ်လီဖုန်း ဆက်မလား လို့ စောင့်မျှော် နေ ခဲ့ကြပါတယ်။
လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားတွေထဲမှာ အသတ်ခံရတဲ့အလုပ်သမားနဲ့ တရွာတည်း အတူတူ အလုပ်လာလုပ်သော အလုပ်သမား တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ထိုသူလည်း ညစဉ် အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်ခဲ့ပါတယ်။ ညစဉ် အိမ်မက်ထဲမှာ အသတ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမားကသူ့ အတွက် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမျှအတန်းပေးဝေဖို့ လာပြောတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သူ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပိုက်ဆံအချို့ကို သူ့မိသားစုထံ ပို့ပေးဖို့လည်း အိမ်မက်ထဲမှာ လာလာပြောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျန်တဲ့ အလုပ်သမားတွေလည်း သူတို့ သတ်လိုက်တဲ့ အလုပ်သမားမိသားစုကို သနားပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သူ့မိသားစုထံနှစ်လ တစ်ကြိမ် စုပေါင်းပြီး ပိုက်ဆံ ပို့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တိုက်မှာ နေထိုင်တဲ့ တရုတ်မိသားစုတွေက သရဲခြောက်တယ်လို့နာမည်ထွက်လာတဲ့ အမှိုက်သွားပြစ်ရာ လမ်းကြားကို ပထမတော့စာရွက်တွေ သွားကပ်ပါတယ်။ အဲဒီစာရွက်တွေက တရုတ်ဘုံကျောင်းတွေမှာ ပေးဝေတဲ့ ဘာသာရေးစာ ရေးသားထားတဲ့ စာရွက်တွေပါ။ဒါပေမဲ့ သရဲခြောက်တဲ့ ပြဿနာက ပြေလည် မသွားပါဘူး။ လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားတွေလည်း နောက် လေး …ငါးလအကြာလောက်မှ အဲဒီတိုက်ကနေ အခြားတစ်နေရာကို ပြောင်းရွှေ့သွားပါတယ်။ သူတို့ လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး တစ်နှစ်ကျော်ကျော် အကြာမှာ အသတ်ခံရသူရဲ့ မိသားစုထံကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ မတော်တဆဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားကြောင်း အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က မိသားစုလည်း ဘုမသိ ဘာမသိနဲ့ သူများပြောတာကို ယုံပြီးလက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ရေခြားမြေခြားမှာ တရားမ၀င် နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ သေဆုံးမှုမှာအလောင်းကို ပြန်သယ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲမှာပဲလို့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုက မှတ်ယူခဲ့ပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုသလိုပဲ မြန်မာပြည်က ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့မိသားစုဟာ ယခင်က လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အခန်းနံဘေးက အခန်းမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့မိသားစုမှာ ဆရာဝန် လင်မယား၊ သားသမီးသုံးဦး၊ အဖွားဖြစ်သူတို့ ပါရှိတဲ့ လူခြောက်ဦးပါ။ သူတို့ ပြောင်းရွှေ့လာပြီးလပိုင်းအတွင်း သူတို့အလွှာမှာ နေထိုင်တဲ့ တရုတ် မိသားစု တွေနဲ့ခင်မင် ရင်းနှီး လာပါတယ်။ တရုတ်မိသားစုတွေဆီကနေ အမှိုက်ပြစ်တဲ့လမ်းကြားမှာ ညဖက်ဆိုရင် သရဲခြောက် တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားကိုသူတို့ ကြားသိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကို အဌားကား(TAXI) ပေါ်တင်ပြီး တိုက်ပေါ်ကို ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံး အနည်းငယ် မူးနေတာကြောင့် သူတို့အခန်းရှိရာနဲ့ နီးကပ်တဲ့ လှေကားကနေ အပေါ်ထပ်ကို တက်လာခဲ့ပါတယ်။ လှေကားအပေါ်ကို တက်ခါစမှာ အပေါ်ကစကားပြောနေသံလိုလို သူတို့ ကြားနေရပါတယ်။ သူ့တို့စိတ်ထဲမှာ သူတို့ နှစ်ဦးစလုံး မူးနေလို့ အိမ်ရှင် ဆရာဝန်မိသားစု အခန်းတံခါး အပြင်ထွက်ပြီး စောင့်နေတာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်နေပါတယ်။
လှေကားကနေ သူတို့အလွှာထဲ ချိုးအကွေ့မှာ ရုတ်တရက်နှစ်ဦးစလုံး ကြက်သီးတွေ ထ သွားပါတယ်။ မူးနေတာလည်း ပြေသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ သူတို့ ခုနက ကြားနေရတဲ့ အသံကို သတိရလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ နံဘေးပတ်ပတ်လည်ကို လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့ အမှိုက်သွားပြစ်နေကြ လမ်းကြားထဲမှာ လူတစ်ယောက်က ကျောပေးပြီး အမှိုက်ပြစ်တဲ့ အပေါက်ဝ အပေါ်က နံရံကိုလက်နှစ်ဖက်မြှောက်တွန်းလို့ ခပ်ကုန်းကုန်း ရပ်နေပါတယ်။
အဲဒီလူရဲ့ နောက်ဖက်မှာ ကလေးငယ်တစ်ဦးက ငိုနေပြီး ကျောပေးရပ်နေသူရဲ့ တင်ပါးကို တဖြန်းဖြန်းနဲ့ ရိုက်နေပါတယ်။ သူတို့ ရပ်လိုက်တဲ့ ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ ကလေးငယ်ဟာ သူတို့ဖက်ကို လှည့်ကြည့်လာပါတယ်။ ကလေးရဲ့ မျက်လုံးနှစ်ဖက်ဟာ တော်တော်လေး ငို
ကလေးက သူတို့ကို မြင်မြင်ချင်း အံ့အားသင့်သလို ဖြစ်သွားပြီး စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ ငိုနေတဲ့ ကလေးငယ်ကို ဆရာဝန်ဖြစ်သူက တချက်ပြုံးပြပြီး သူ့တို့အခန်းဖက်ဆီ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ခြေလှမ်း လေး …. ငါးလှမ်းလောက် လှမ်းပြီးချိန်မှာ သူတို့ နောက်ကျောဖက်ကနေ အသံတစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။ “ညီလေးတို့” ဆိုတဲ့ အသံကို သူတို့နှစ်ဦး သေသေချာချာ သဲသဲကွဲကွဲ ကြားလိုက်ရတာပါ။ ဒါနဲ့ နောက်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ နောက်မှာ ဘယ်သူကိုမျှ မတွေ့ရပါ။ သူတို့စိတ်ထဲ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ အခန်းဆီ ဆက်မသွားသေးပဲ အခုလေးတင် ကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အမှိုက်ပြစ်တဲ့ လမ်းကြားဆီ နှစ်ဦးသား ပြန်သွားကြည့်ပါတယ်။ လမ်းကြားထိပ်ကို ရောက်တော့ လမ်းကြားထဲမှာ ဘယ်သူကိုမျှ မတွေ့ရတာကြောင့်အရမ်း အံ့သြသွားပါတယ်။ ခုနက ကျောပေးရပ်နေသူနဲ့ ကလေးငယ်တို့၊ဒီလမ်းလေးထဲကနေ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်သာ ရှိတဲ့ အချိန်အတွင်းလျင်လျင်မြန်မြန်ကြီး ထွက်ခွာ ပျောက်ကွယ် သွားဖို့ ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးကြည့် မိလိုက် ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အထိ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး သရဲခြောက် ခံနေရ တယ်လို့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ မထင်သေးပါဘူး။
သူတို့နေထိုင်ရာ အခန်းရှေ့ရှိ ပထမ သံတခါးမှာ ခတ်ထားတဲ့ သော့ခလောက်ကို ဖွင့်ရင်း အထဲကို အ၀င်မှာ သော့ခလောက်အိမ်က ကြမ်းပြင်ပေါ် ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ အိမ်ရှင် ဆရာဝန်ဖြစ် သူက ပြုတ်ကျသွားတဲ့သော့ခလောက်အိမ်ကို ကုန်းကောက်လိုက်ချိန်မှာ နံဘေး က ဧည့်သည်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက …“ဟိုနား ပုန်းနကွယ်ကနေ လူနှစ်ယောက် ခေါင်းလေးတွေ ထွက်ပြီးပြူး တစ် ပြူးတစ်နဲ့ ငါတို့ကို ကြည့်နေတယ်ကွ …”လို့ ပြောပါတယ်။
အိမ်ရှင်ဆရာဝန်က လှမ်းကြည့်တော့ ဘာမျှ မတွေ့ရပါဘူး။သော့ခလောက်ပြုတ်ကျသံ၊ သံတခါး ဖွင့်သံတွေကြောင့် အိမ်ထဲကမိသားစုလည်း အတွင်း သစ်သားတံခါးကို ဖွင့်လာပါတယ်။ ဧည့်သည်ဖြစ်သူက အိမ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ မိသားစုကို ဒီတိုက်မှာ အခြားမြန်မာ အလုပ်သမားတွေ စုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ အခန်းများ ရှိသလားလို့ မေးမြန်းစပ်စုရင်း အခန်းထဲကို ၀င်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆရာဝန်မိသားစုက ဧည့်သည် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို သူတို့အလွှာရဲ့ အမှိုက်ပြစ်တဲ့ လမ်းကြား မှာ ညဖက် သရဲခြောက်ကြောင်း ရှင်းပြကြပါတယ်။ နံဘေးခန်းက လူတွေဆိုရင် ညဖက်မှာ အဲဒီနေရာ ဆီအမှိုက်သွားမပြစ်ရဲသလို တတိုက်လုံးမှာ နေတဲ့ လူတွေလည်း အဲဒီဖက် လှေကားကို ညဖက်မှာ အတက်အဆင်း မလုပ်ရဲကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ဧည့်သည် သူငယ်ချင်း က သူ အလုပ် လုပ်နေတဲ့ စက်ရုံမှာသရဲတစ္ဆေခြောက်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ နေရာတွေ မှာ စပ်စုစမ်းသပ်ချင်တဲ့ လူငယ်အလုပ်သမားများ ရှိကြောင်း၊ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် သူတို့ ကိုခေါ်ဆောင်ပြီး အလည်လာချင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ အိမ်ရှင်မိသားစုက အရမ်းဆူဆူညံညံ မဖြစ်ဘူးဆိုရင် အလည်လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီည တညလုံး အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ဆရာဝန်ဟာ အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်ပြီး အိပ်ယာက လန့်လန့်နိူးပါတယ်။ အိမ်မက်ထဲမှာ သူတခါမျှ မတွေ့ဖူးတဲ့ လူတစ်ယောက်က သူ့ကို သင်္ချိုင်းကုန်းတစ်ခုသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်၊ ပြီးတော့ အုတ်ဂူတစ်ခုကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး ကလေးကစားစရာ မော်တော်ကားတစ်ခု ရှာဖွေ လာထားပေးဖို့နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို ရွတ်ပြပြီး သူ့သားသမီးတွေကိုအကူအညီပေးဖို့လည်း ငိုပြီး ပြောပါတယ်။ အဲဒီအိမ်မက် အကြောင်း ဆရာ ၀န်က ကျန်တဲ့သူတွေကို ပြောပြပါတယ်။
မနက်မိုးလင်းတော့ အိမ်ကိုပြန်မယ့် ဧည့်သည်ဖြစ်သူ ငယ်သူငယ်ချင်းကို ညက သူ မက်ခဲ့တဲ့ အိမ်မက် အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက …“ဒါ မင်းကို ချဲထိုးဖို့ နံပါတ် ပေးတာနဲ့ တူတယ်၊ အိမ်မက်ထဲမှာ သူ ပြောသွားတဲ့ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးဂဏန်း လေးလုံး ကို ဒီတိုင်းပြည်က လေးလုံးထီမှာ သွားထိုးကြည့်ပါလား …”
လို့ ရယ်မော စရာ ပြောပါတယ်။တခါမျှ ထီမထိုးဖူးတဲ့ ဆရာဝန်လည်း ထီဆိုင်မှာ သွားပြီး လေးလုံးထီကို အရှေ့ ငါးကျပ်၊ အနောက် ငါးကျပ်ဖိုး ထီထိုးပါတော့တယ်။
နောက်တနေ့ ညနေမှာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ လူငယ်လေးယောက်တို့သူတို့အခန်းကို အလည်ရောက် လာပါတယ်။ အလည်လာသူများကသရဲခြောက်တဲ့ ကိစ္စကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြည့် ချင်ကြောင်း ပြောကြပါတယ်။ ဘယ်လို စမ်းသပ်မှာလဲလို့ မေးကြည့်တော့ လူငယ်များ က သူတို့မှာ နည်းလမ်း (၂)ခုရှိကြောင်း၊ ပထမ နည်းက သရဲခြောက်တဲ့နေရာဆီ သစ်သား ခုံ တစ်ခု သယ်သွားမယ် … ပြီးတော့ အဲဒီ သစ်သားခုံပေါ်မှာ လက်ဖ၀ါးတွေကို မှောက်ခုံ အနေ အထားနဲ့ ကားပြီး ဖြန့်ထားရမယ် … လက်မချင်း ထိထားရမယ် .... လူတိုင်း အဲဒီပုံစံလုပ်ရမယ် … တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး လက်သန်းချင်း ထိထားရမယ်… ခုံအလယ်မှာ အသားစိမ်းတစ်ခုကို ခွက်တစ်ခုနဲ့ လုံအောင်အုပ်ပြီးအဲဒီအပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းထားရမယ် … နံဘေးမှာ ရပ်ကြည့်နေသူ မရှိရဘူး … သရဲခေါ်တဲ့လူက လွဲရင် အစီအစဉ် စတဲ့အချိန်ကနေ ပြန်ထွက်ဖို့ ပြောတဲ့အထိ ဘယ်သူမျှ စကားမပြောရဘူး… လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒုတိယနည်းကတော့ “ခေါစာ”ပြစ်ပြီး “ပြာ” ခင်းတဲ့ နည်းလို့ ဆိုပါတယ်။ ဖိနပ်ကို ဘယ်ညာပြောင်းစီးရမယ် … အင်္ကျီကို ပြောင်းပြန်ဝတ်သွားရမယ် … “ခေါစာ” သွားပြစ်မယ့် လူက “လိပ်ပြာ” ရင့်တဲ့သူ(လုံးဝ အကြောက်အလန့် မရှိသူ) … လက်ပြန်အနေအထားနဲ့ ခေါစာကျွေးမဲ့ လင်ဗန်းကို ချရမယ် … လင်ဗန်းရဲ့ နံဘေး ပတ်ပတ်လည်မှာ“ပြာ”မှုန့်တွေ ခင်းရမယ် … ဟင်းအိုးအုပ်တဲ့ စလောင်းဖုံး တစ်ခုခုနဲ့အသံထွက်အောင် တီးပြီး လာစားဖို့ ဖိတ်ရမယ် … ခေါစာ ပြစ်ထားတဲ့နံဘေးကို ဘယ်သူမျှ မသွားရဘူး … နှစ်နာရီလောက်နေရင် လာ မလာဆိုတဲ့ “ခြေရာ”တွေကို ပြာတွေပေါ်မှာ သွားကြည့်လို့ ရကြောင်းပြောပြကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အိမ်ရှင် ဆရာဝန် အပါအ၀င် လူခြောက်ယောက်တို့ဟာသရဲ ရှိ မရှိကို စမ်းသပ်ဖို့ အလုပ်များကြပါတော့တယ်။ သူတို့တိုက်နံဘေးရှိ တရုတ်မြေစိုက်နတ်စင်ကနေ အမွှေးတိုင်ကြောင့်ကြွေကျထားတဲ့ ပြာမှုန့်တွေကို သွားယူကြပါတယ်။ နောက်ဖေး မီးဖိုချောင်မှာ Gas မီးဖိုကို အသုံးပြုတာကြောင့် အိမ်တွေမှာ ပြာမှုန့်ရှာဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်သတင်းစာတွေကို မီးရှို့ပြီး“ပြာ” ရအောင် လုပ်ရပါတယ်။ သူတို့ စမ်းသပ်ဖို့ သဘောတူ ထားတဲ့နည်းလမ်းက ဒုတိယ နည်းလမ်းပါ။ ပထမ နည်းကို သဘောမတူကြပါဘူး။ ခေါ်လိုက်လို့ ၀င်လာရင်၊ ၀င်လာတဲ့ သရဲက သရဲထက်ကြီးသော “သဘက်” ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိမှာ စိုးလို့ပါ။
ည (၉)နာရီ ကျော်ကျော်လောက်မှာ သရဲခြောက်တဲ့ အမှိုက်ပြစ်ရာလမ်းကြားဆီကို သူတို့ သွားကြပါတယ်။ “ခေါစာ” ပြစ်မဲ့ လင်ဗန်းထဲမှာစားစရာတွေ အပြင် လွန်ခဲ့တဲ့ ညက ဆရာဝန်ဖြစ်သူရဲ့ အိမ်မက်ထဲကအတိုင်း ကလေးကစားစရာ အရုပ်ကားလေး တစ်စီးကိုပါ ထည့်ယူလာကြပါတယ်။ အမဲသား၊ ၀က်သားဟင်းတွေ၊ ခေါက်ဆွဲကြော်တွေနဲ့ ကလေးကစားစရာ မော်တော်ကားလေး တစ်ခု အပါအ၀င်လင်ဗန်းအလယ်မှာ အမွှေးတိုင် သုံးချောင်းလောက်ကို မီးရှို့ ထိုးစိုက်ကြပါတယ်။ ဗလတောင့်တောင့် လူငယ်တစ်ဦးက “ခေါစာ” ပြစ်တဲ့အ လုပ်ကို လုပ်ပါတယ်။ သူက “ခေါစာ” ထည့်ထားတဲ့ လင်ဗန်းကို လက်ပြန်ပုံစံနဲ့ ချအပြီးမှာ ကျန်တဲ့သူတွေက အသင့်ယူဆောင်လာတဲ့ “ပြာမှုန့်”တွေကို လင်ဗန်းကနေ သုံးပေလောက်ရှိတဲ့ အကွာအဝေး အထိ ခပ်ထူထူလေး ခင်းကြပါတယ်။ ပြာမှုန့်တွေ ဘယ်သူမျှ မနင်းမိအောင် ဂရုတစိုက် ခင်းပြီးချိန်မှာ “ခေါစာ”ကျွေးသူက စလောင်းဖုံးကို ဟင်းမွေရာမှ အသုံးပြုတဲ့ ယောင်းမနဲ့ သုံးချက်လောက်တီးပြီး ပါးစပ် ကလည်း “ဒီနေရာမှာ ရှိတဲ့၊ နေထိုင်နေတဲ့ မကျွတ်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရင် လာရောက်ပြီး အားရပါးရ စားသုံးကြပါ …” လို့အသံခပ်အုပ်အုပ်နဲ့ သရဲ ခေါ်ပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်အုပ်စုလုံး စကားပြောလိုက် အိမ်ထဲက မိသားစု ကျွေးမွေးတဲ့ မြန်မာပြည်က လာတဲ့ လဖက်သုတ်နဲ့ ရေနွေးကြမ်းတွေသောက်ရင်း စောင့်နေကြပါတယ်။ ည (၁၁)နာရီ ကျော်ကျော်လောက်မှာ လှေကားကနေ တစုံတယောက် ပြေးတက်လာတဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းခြေ သံတစ် ခုကို သူတို့ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ခြေသံဟာ လှေကားကနေ သူတို့ အလွှာကို ကွေ့ဝင်လို့ရတဲ့ နေရာအရောက်မှာ လုံးဝ ရပ်သွားပြီး ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကလေးငယ် တစ်ဦးဟာ “ခေါစာ” ပြစ်ထားတဲ့ အမှိုက်သွားပြစ်ရာ လမ်းကြားထဲဆီ ပြေးဝင်သွားပါတယ်။ ပထမတော့ စောင့်ကြည့်နေသူ အားလုံးကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က “ဒီကလေးက ဘယ်ကလဲ” လို့ ပြောလိုက်တော့မှ အားလုံးသတိဝင်လာပြီး လမ်းကြားလေးဆီအပြေးအလွှား သွားကြည့်ကြပါတော့တယ်။
အမှိုက်သွားပြစ်တဲ့ လမ်းကြားထိပ်ကို ရောက်ဖို့ ဆယ်ပေကျော်ကျော်လောက်သာ အလိုမှာ လမ်းကြားထဲမှ တစုံတယောက်က အပြင်ကိုပစ္စည်းတစ်ခု လွှင့်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ လွှင့်ပြစ်ခံရတဲ့ ပစ္စည်းကို သူတို့အားလုံး ၀ိုင်းကြည့်လိုက်တော့ “ခေါစာ” ပြစ်ထားတဲ့ လင်ဗန်းထဲမှာ သူတို့ထည့်ပေးထားတဲ့ ကလေးကစားစရာ မော်တော် ကားလေးပါ။ လမ်းကြား ထိပ်ကို ရောက်ရှိ သွားပြီး လမ်းအတွင်းကို ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူကိုမျှ မတွေ့ရပါ။ ခုနက ကလေး ဘယ်ပျောက် သွားသလဲလို့ပဟေဠိဆန်ဆန်ဖြစ်နေချိန်မှာ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က …“ဒီမှာကြည့် ပြာတွေပေါ်မှာ ခြေရာတွေ အများကြီးပဲ”
“ခေါစာ” ဗန်းထဲက အစား အစားတွေလည်း တစ်ယောက် ယောက်စားသောက်ထားသလို ပုံပျက် နေပြီး နံဘေးမှာ ခင်းထားတဲ့ ပြာတွေပေါ်မှာလည်း ခြေရာ အသေးတွေရော အကြီးတွေရော ရှုပ်ရှက်ခတ်နေပါတယ်။ အဲဒီချိန်မှာ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က မျက်လုံးပြူးမျက်ဆန်ပြူးနဲ့ အမှိုက်ထုပ် ပြစ်ချရာ အပေါက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး“ဟိုမှာ …ဟိုမှာ” လို့ အော်ပါတော့တယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေ ၀ိုင်းကြည့်ကြတော့ ဘယ်သူကိုမျှ မတွေ့ရပါဘူး။ ရုတ်တရက် သူတို့အားလုံးရဲ့ မျက်စိရှေ့က အမှိုက်ပြစ်တဲ့ အပေါက်ဝရှိ အနံ့ပြန် မတက်အောင် ဖုံးကားပေးတဲ့ သံပြားဖုံးဟာ သူ့အလိုလို ပွင့်ပြီး ပြန်ပိတ်သွားပါတယ်။
“ဟိုမှာ .. ဟိုမှာ”လို့ အော်နေတဲ့ လူငယ်လည်း အော်ရင်း တန်းလန်းနဲ့ လဲကျသွားပါတယ်။ တစ်အုပ်စု လုံး သတိမေ့သွားတဲ့ လူငယ်ကိုပွေ့ချီပြီး အခန်း ရှိရာဆီ အမြန် သယ်ဆောင် ရပါတော့တယ်။
ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သံတွေကြောင့် သူတို့နေထိုင်ရာအလွှာရှိ နံဘေးခန်းက လူတွေလည်း အပြင် ထွက်ကြည့်ကြပါတယ်။ သူတို့လည်းမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နေခဲ့ကြပါတယ်။ မိနစ်(၂၀) နီးပါး ၀ိုင်းပြုစုအပြီးမှာ သတိလစ်သွားတဲ့ လူငယ်လည်း သတိပြန်ရလာပါတယ်။ အကြောက် လွန်နေသူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘုရားစင်က သောက်တော်ရေတွေစွန့်ပြီး ပက်ဖြန်း တဲ့သူက ဖြန်း၊ လည်ပင်းမှာ စိတ်ပုတီး ဆွဲပေးကြနဲ့အလုပ်ရှုပ်ကြပါတော့တယ်။ သတိပြန်ရ လာသူအား စိတ်ငြိမ်သွားရန်ဆရာဝန်က ဆေးတစ်လုံး တိုက်လိုက်ပါတယ်။
အခန်းပိုင်ရှင် မိသားစုက အမှိုက်ပြစ်ရာ လမ်းကြားတွင် သူတို့အုပ်စုခေါစာပြစ်ခဲ့တဲ့ လင်ဗန်းနဲ့ ပြာမှုန့်တွေ ကို မနက်ကြမှ သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့က အဲဒီနေရာ ကိုနောက်တစ်ခေါက် သွားကြည့်ချင်ကြောင်း ပြောကြပါတယ်။ သူတို့တတွေ အခန်းအပေါက် ၀ကနေ အဲဒီလမ်းကြားလေး ထိပ်ဆီ ထွက်ကြည့်ကြပါတယ်။ တိုက်တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေ ပါပြီ။ ခုနက မီးပွင့်လာတဲ့နံဘေးအခန်းတွေလည်း မီးတွေပိတ်ပြီး ပြန်အိပ်သွားပုံ ရပါတယ်။ သူတို့နံဘေးအခန်းမှ အိမ်မြှောင်တစ်ကောင်ရဲ့ စူးစူးဝါးဝါး စုတ်ထိုး သံကြောင့်သူ တို့အားလုံး လန့်သလိုလို ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ လက်က နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ (၁)နာရီ ထိုးဖို့ မိနစ် အနည်းငယ် လိုပါသေးတယ်။
အခန်းအပေါက်ဝကနေ အမှိုက်ပြစ်ရာလမ်းကြားဆီကို သူတို့အားလုံးထပ်သွားကြဖို့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ သူတို့အားလုံး လမ်းကြားလေးဆီမှာ ဘာများ ဆက်ဖြစ်လာမလဲလို့ စိုက်ကြည့် နေကြပါတယ်။အခန်းအားလုံးဆီကနေ အိမ်မြှောင်တွေရဲ့ ဆက်တိုက် စုတ်ထိုး သံကြောင့် သူတို့ အရမ်းအံ့သြနေပါတယ်။ ရုတ်တရက် အမှိုက်ပြစ်ရာ လမ်းကြားထိပ်ရှိ မီးရောင်အောက် မှာ လူအရိပ်နှစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူတို့အားလုံး နည်းနည်း တွေးဝေသွားပါ တယ်။ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က …“ဖြစ်ချင်တာဖြစ် သွားကြည့်ကြရအောင်၊ အရမ်းကြီး ကြောက်မနေနဲ့”ဒီလိုနဲ့ သူတို့အားလုံး ခပ်လန့်လန့်ဖြင့် လမ်းကြားထိပ်ကို အသွား၊ မရောက် တရောက်လောက်မှာ မီးရောင်အောက်က အရိပ်နှစ်ခုဟာသူ့အလိုလို ပျောက် သွားပြန် ပါတယ်။ သူတို့ထဲက တချို့လည်းဘောင်းဘီးက ခါးပတ်တွေ ဆွဲဖြုတ်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ခါးပတ်နဲ့ရိုက်မယ့်ပုံစံ အသင့်ပြင်ထားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့ထဲကလူငယ်တစ်ဦးမှ …
“ခုနက ဒီလမ်းထိပ်က ဟိုဟာ(ကလေးကစားစရာ) လေးရော”လမ်းထိပ်ကို ပထမ တခေါက် အလာမှာ အတွင်းကနေ လွှင့်ပြစ်လိုက်တဲ့ကလေးကစားစရာ အရုပ်ကားလည်း မတွေ့ရတော့ ပါ။ လမ်းကြားရှေ့ကို အရောက်၊ အတွင်းကို ကြည့်လိုက်တော့ “ခေါစာ” ပြစ်ထားတဲ့ လင်ဗန်းလည်း မရှိတော့ပါ၊ အမှိုက်ပြစ်တဲ့ အပေါက်ဝအောက်မှာကစားစရာ အရုပ်ကားလေး ရောက်နေ တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြာမှုန့်တွေလည်း ပြန့်ကြဲနေပြီး နင်းပြီးလျှောက်ထားသလို လူခြေ ရာ ပုံစံအများအပြားကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ လေး …. ငါးမိနစ်လောက်ဟိုကြည့် ဒီကြည့် အပြီးမှာ သူတို့အားလုံး အခန်းရှိရာဆီ လှည့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ခန်းသို့ ရောက်လု ဆဲဆဲမှာ အနောက်ဖက်မှ “တောက်”ခေါက်သံ တစ်ခုကို ပီပီသသ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ လှည့်ကြည့် လိုက်တော့ ဘာမျှ မတွေ့ရပါ။ သူတို့အားလုံး အခန်းအတွင်းကို ၀င်ကြတော့ မယ့်ဆဲ ဆဲမှာ လူတစ်ဦးရဲ့ ငိုရှိုက်သံလိုလို အသံ သဲ့သဲ့တချို့ကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ နောက်တခေါက် သွားကြည့်ဖို့ သူတို့မရဲတော့ပါ။
ဆရာဝန်၊ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ “ခေါစာ” ပြစ်ခဲ့တဲ့ ဗလတောင့်တောင့်လူငယ် သုံးဦးတို့ဟာ သူတို့ အိမ်ခန်းထဲမှာ ထိုင်ပြီး စကားပြောနေကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အပြင်က ဧည့်ခေါ် ခေါင်းလောင်းတီးသံ ကြားရပါတယ်။ တံခါးကို သွားဖွင့်ကြည့်တော့ အသက်လေး ဆယ်ကျော် အရွယ် လူကြီးတစ်ဦးနဲ့ အသက် ရှစ်နှစ် … ကိုးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တို့ကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့က နံဘေးအခန်းမှာ နေသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ပြောပြ စရာ ရှိတယ်လို့ ပြောဆိုပြီး သူတို့နေ ထိုင်ရာ ကပ်လျှက် အခန်းထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ အခန်းထဲ ရောက်ရောက် ချင်းမှာပဲ ကလေးငယ်က သူတို့သုံးဦးကို အခန်းအတွင်းထဲရှိ ရေချိုခန်းကိုလက်ညှိုး ထိုးပြပါ တယ်။ ရေချိုးခန်းအတွင်းကို ရောက်တော့ အိမ်သာအပေါ်ရှိ ရေဆွဲချရာ ရေပုံးထဲကို ပစ္စည်း တစ်ခုခု နှိုက်ယူပေးဖို့ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ပြပါတယ်။ ရေဆွဲချရာ ပုံးထဲကို နှိုက်ကြည့် လိုက်တော့ပလပ်စတစ်နဲ့ သေသေချာချာ ထုတ်ပိုးထားတဲ့ ကလေးကစား စရာ အရုပ် ကားလေး တစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကလေးငယ်ကအုတ်နံရံဖက်ကို လက်ညှိုး ထိုးပြ လိုက်ပါတယ်။ အုတ်နံရံဟာ တီဗွီမျက်နှာပြင် တစ်ခုလိုဖြစ်လာပြီး သင်္ချိုင်းတစ်ခုကို မြင်နေရ ပါတယ်။ သင်္ချိုင်းထဲရှိလမ်းအကွေ့အကောက် အတော်များများကို ဖြတ်ကျော်အပြီးမှာ အုတ်ဂူတစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။ ကလေးငယ်က ရေပုံးထဲမှာ ရရှိလာတဲ့ အရုပ်ကားလေးကို အဲဒီအုတ်ဂူပေါ်မှာ ထားပေးဖို့ ပြသပါတယ်။ အဲဒီနောက်ရုတ်တရက်ဆိုသလို နံရံပေါ်က မြင်ကွင်းရော ကလေးငယ်ပါပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။
အဲဒီချိန်မှာ သူတို့သုံးဦးကို အခန်းအတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်လာတဲ့လူကြီးဖြစ်သူက စကားပြောဖို့ ဧည့်ခန်းအတွင်းကို ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၅)နှစ် နီးပါးက ဒီတိုက်မှာအလုပ်လုပ်ရင်း နေထိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်သား တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊အလုပ် လုပ်တဲ့ နေရာကနေ ကလေးကစားစရာ ပစ္စည်းတစ်ခုကိုယူဆောင်လာမိကြောင်း၊ တနေ့တော့ အခန်းထဲမှာ သောက်ရင်းစားရင်းကနေ မူးပြီး သူအိပ်ပျော်သွားကြောင်း၊ အဲဒီနောက် သူသတိလစ်သလို ဖြစ်သွားကြောင်း၊ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တစုံတယောက်ရဲ့ ၀င်ရောက် ပူးကပ်ခြင်း ကို ခံရပြီး အခန်းဖော်တွေနဲ့ အချင်းများခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးမှာ သူ့အခန်းဖော် သူငယ် ချင်း အလုပ်သမားများက သူ့ကို ရက်စက်စွာ သတ်ပြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သူ သေဆုံးပြီး တစ်နှစ်ကျော် တဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာပြည်ရှိ ကျန်ရစ်သူ သူ့မိသားစုက ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမျှအ တန်း ပေးဝေခဲ့ကြောင်း၊ သူ သေဆုံးတဲ့ ဒီနေရာမှာ ယနေ့အချိန်အထိ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မူများ လုံးဝ မလုပ်ရသေးကြောင်း၊ မြန်မာပြည်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော သူ့သား သမီးများ အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သူ သူ့သားလေးမှာ ယခုအခါ ပင်ပင် ပန်းပန်း ဆင်းဆင်း ရဲရဲဖြင့် မိသားစုအား လုပ်ကျွေးနေရကြောင်း၊သူ့အတွက် အမျှအတန်းပေးဝေဖို့နဲ့ သူ့သား အကြီးဆုံးလေးကို
ဒီနိုင်ငံမှာ တရားဝင်အလုပ်သမားအဖြင့် အလုပ် လုပ်ခွင့်ရဖို့ကူညီပေးစေလိုကြောင်း ပြောပါ တယ်။ မြန်မာပြည်ရှိ သူ့မိသားစုထံ ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုကိုလည်း ပေးပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူလည်း ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။
မနက်စောစောစီးစီး ဧည့်သည်တွေထဲမှ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့“ခေါစာ” ပြစ်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တို့ နှစ်ဦး ညက အိမ်မက်ဆိုးများ မက်ကြောင်းအိမ်ရှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက် (၂) ရက်ခန့်အကြာမှာ ဆရာဝန်ဖြစ်သူဟာ အလုပ်ထဲကနေ အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ရှေ့ သံတံခါးကို ဖွင့်အ၀င်မှာ သူ့နားထဲမှာ နံဘေးကနေ တစုံတယောက် တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ သူ့ကိုပြောသွားတဲ့ စကားသံက …“ညီလေး၊ မင်း ထီထိုးထားတာ … တိုက်ပြီးပြီလား …”ရုတ်တရက် သူ ကြောင်သွားပါတယ်၊ နံဘေးကို ကြည့် လိုက်တော့ လည်းသူ့နံဘေး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်သူကိုမျှ မတွေ့ရပါ။ ဒါနဲ့ သူလည်း ထီထိုးခဲ့ တာကို သတိရသွားပြီး တိုက်အောက်ထပ်ကို ပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။တိုက်နံဘေးက အိန္ဒိယ ကုန်စုံ ဆိုင်အရှေ့ရှိ သတင်းစာအပုံမှာ သူ ထိုးထားတဲ့ ထီနံပါတ်ကို ရှာဖွေလိုက် ပါတယ်။ သူ အရမ်းအံ့သြ သွားပါတယ်။သူ့ သူငယ်ချင်း ရယ်စရာအဖြစ် ပြောခဲ့တဲ့၊ သူ့အိမ် မက်ထဲမှာ သရဲပေးခဲ့တဲ့ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးဂဏန်းလေးလုံးဟာ ထီရဲ့ဒုတိ ယဆုနေ ရာမှာ တွေ့လိုက်ရလို့ပါ။ ထီထိုးထားပေမဲ့ ထီပေါက်ဖို့လုံးဝ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ သူ့အဖြစ် ဟာ သူ့ကိုယ်သူ မယုံသလိုနဲ့သတင်းစာပေါ်က နံပါတ်ကို ကြည့်လိုက် လက်ထဲမှာ ထိုးထားတဲ့ ထီ စာရွက်ကို ကြည့်လိုက်နဲ့ ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေပါတယ်။
အိမ်ရှင်ဆရာဝန်ဖြစ်သူဟာ သူ့မိသားစုကို ထီပေါက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းစုံကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ သူ့ဇနီး သည်နဲ့ မိခင်ဖြစ်သူတို့က ကွယ်လွန်သွားသူအတွက် ဆွမ်းသွတ်အမျှ ပေးဝေဖို့၊ အိမ်မက် ထဲမှာ ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ မယုံတ၀က် ယုံတ၀က်နဲ့ အိမ်မက်ထဲက ဖုန်းနံပါတ်ကို သူ ဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် က တယ်လီဖုန်းပိုင်ရှင်မိသားစုရဲ့ အကူအညီပေးမှုကြောင့်ကျန်ရစ်သူ မိသားစုနဲ့ သူ အဆက် အသွယ် ရခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၅)နှစ်လောက်က ဒီတိုင်းပြည်မှာ အလုပ်လာ လုပ်ရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့သူနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု ကိုအကူ အညီပေးချင်ကြောင်း ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာ သူ ထီပေါက်လို့ ရခဲ့တဲ့ ငွေတွေထဲက မြန်မာငွေ (၁၀) သိန်း တန်ဖိုးကိုလွှဲပို့ပေးလိုက်သလို ကွယ်လွန်သူရဲ့ သားအကြီး ဆုံးဖြစ် သူကို လည်းဒီတိုင်းပြည်မှာ တရားဝင် အလုပ်သမားအဖြစ် လာရောက်နိုင်အောင်အစစ အရာရာ အကုန်အကျခံ ကူညီမယ်ဖို့ ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီရက်တွေ နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာဝန်ဖြစ်သူဟာ သူ့အခန်းနဲ့ကပ်လျှက်အခန်းက အခန်းပိုင် ရှင်တွေ ကို လိုက်လံစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။အခန်းပိုင်ရှင် တရုတ်အဖွားကြီးဟာ အဲဒီအခန်းမှာ တခါတ ရံသာ လာနေလေ့ရှိကြောင်း နံဘေးခန်းတွေက ပြောပြကြပါတယ်။ဒါနဲ့ အခန်းပိုင်ရှင် တရုတ် အဖွား အို ရှိရာဆီ သူ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အဖွားအိုက ဆရာဝန်မိသားစုအခန်းနံဘေးရှိ သူ့အခန်း ဟာ နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ သူ့သမီးနဲ့ သမက်တို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အခန်း ဖြစ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၅)နှစ် ပတ်ဝန်းကျင်က သူ့တို့မိတ်ဆွေ တရုတ်လူမျိုးတစ်ဦးက သူ့ အလုပ် သမားများ နေထိုင်ရန် ဌားရမ်းခဲ့ဖူးကြောင်း၊ အဲဒီနောက်တော့ အိမ်ဌားတွေ ခဏ ခဏပြောင်းရွှေ့ကြကြောင်း၊ ဒါနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်သူကိုမျှ မဌားတော့ပဲ သူ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခင်က ဘာမျှ မဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူ့အခန်းဟာညဖက်တွေမှာ သရဲခြောက်သလို ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ ဖြစ်ကြောင်း၊ဒါကြောင့် ဘယ်သူကိုမျှ ထပ်မဌားတော့ပဲ တခါတရံ နေ့လည်ပိုင်းတွေမှာ သူ အလည်လာပြီး နေခဲ့ကြောင်း၊ ညဖက်မှာ မအိပ်ရဲတာကြောင့်ယခုအခါ သူတို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းအဟောင်းများသာ ထားရှိသောစတိုးခန်းအဖြစ် အသုံးပြုကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။
ဆရာဝန်ဖြစ်သူက တရုတ်အဖွားအိုအား လွန်ခဲ့သော (၁၅)နှစ်ခန့်ကအဲဒီအခန်းမှာ သူ့သူငယ်ချင်း အလုပ်သမားတစ်စု နေထိုင်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ဟာ အရက် အလွန်သောက်သောကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း၊ ကွယ်လွန်သူ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ တဲ့ပစ္စည်း တစ်ခုဟာ အဲဒီအခန်းထဲမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သူ ဒီတိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီး မကြာ မဏ ဆိုသလို ကွယ်လွန်သူက အိမ်မက်ပေးကြောင်း၊ ဒါကြောင့် အဲဒီအခန်းထဲမှာ ကွယ် လွန် သူ အတွက် ရည်စူးပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တဲ့ ပွဲတစ်ခု လုပ်ချင် ကြောင်း ခွင့်တောင်းခံပါတယ်။ အခန်းပိုင်ရှင် အဖွားအိုကလည်းကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်ပြုခဲ့ ပါတယ်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက် တစ်ခုမှာ ဆရာဝန်မိသားစုနဲ့ ရင်းနှီးသူသူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ များဟာ အဲဒီတိုင်းပြည်ကို ကြွရောက်နေတဲ့မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကို ပင့်ဖိတ် ခဲ့ကြ ပါတယ်။ တရုတ်မိသားစုပိုင်ဆိုင်ရာ အခန်းအတွင်း ကွယ်လွန်သူအတွက် ရည်စူးပြီး ဆုတောင်းမေ တ္တာပို့သလို သရဲခြောက်တယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အမှိုက်သွား
ပြစ်ရာ လမ်းကြားဆီမှာလည်း ပရိတ်တရား နာယူခဲ့ကြပါတယ်။တရားပွဲအပြီး ဆရာဝန်နဲ့ သရဲခြောက် မခြောက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းတို့ဟာ အဲဒီအခန်းထဲရှိ အိမ်သာ အပေါ်မှ ရေဆွဲချရာရေပုံးထဲကို ရှာဖွေ ခဲ့ကြပါတယ်။ ရေပုံးအတွင်းက ပလပ်စတစ်နဲ့ သေသေ ချာချာ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ ကလေးကစားစရာ အရုပ်ကားလေးတစ်စီးကို တွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သရဲ တစ္ဆေ မယုံကြည်တဲ့ ဆရာဝန်ဟာ သူ့အယူအဆကို စွန့်လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
သူတို့နှစ်ဦးဟာ အရုပ်ကားလေးကို တရုတ်သင်္ချိုင်း တစ်ခုခုမှာ သွားထားပြစ်ဖို့ စိတ်ကူးကြ ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဌားကားတစ်စီးကို ဌားပြီးတရုတ်သင်္ချိုင်းတစ်ခုသို့ သွားရောက်ချင်ကြောင်း ကားသမား ကို ပြောပါတယ်။ ကားသမားက ဘယ်သင်္ချိုင်းလဲလို့ မေးတော့ သူတို့နှစ်ဦးလည်း တရုတ် သင်္ချိုင်းဖြစ်ရင် ပြီးရောလို့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ဦး အဌားကားရဲ့ နောက်ခန်း ကနေ လိုက်ပါခဲ့ကြပါတယ်။ကားသမားက ရှေ့ခန်းမှာ ကားမောင်းနေ ရင်း တရုတ် လို ပြောနေ ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ကားသမား အဌားကားဌာနနဲ့ တရုတ် လိုပြောနေ တယ်လို့ပဲ ယူဆနေကြပါတယ်။ ကားဟာ နာရီဝက်နီးပါးကြာအောင် မောင်းနေချိန်မှာ သူတို့ စိတ်ထဲ ဒီကားသမား ပိုက်ဆံပိုလိုချင်လို့ လှည့်ပတ်မောင်းနေတယ် ထင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားသမား ကို ဘယ်တော့ရောက်မလဲလို့ မေးလိုက်တော့ ကားသမားက ခင်ဗျားတို့ သွားချင် တဲ့ နေရာကို မကြာခင် ရောက်တော့မှာပါလို့ပြန်ဖြေပြီး တစ်ယောက်တည်း တရုတ်လို ဆက်ပြောနေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တရုတ်သင်္ချိုင်းကုန်းတစ်ခုရဲ့ ရှေ့မှာ ကားသမားက ကားကိုရပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦး လည်း တရုတ်သင်္ချိုင်းဝန်းထဲကို ရောက်ပြီး ဟိုအုတ်ဂူပေါ်တင်ခဲ့ရင် ကောင်းနိူးနိူး ဒီအုတ် ဂူပေါ်မှာ ထားခဲ့ရင် ကောင်းနိူးနိူးနဲ့သင်္ချိုင်း အလယ်က လမ်းမကြီးအတိုင်း ၀င်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ရုတ်တရက်သင်္ချိုင်းလမ်းမကြီးရဲ့ လက်ဝဲဖက် တစ်နေရာကနေ လေချွန် သံကိုကြား လိုက် ရပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးငယ် တစ်ဦးက သူတို့ကိုလက်ယက်ပြီး ခေါ်နေပါ တယ်။ ဒါနဲ့ ကလေးငယ်ရှိရာဆီ သူတို့ သွားကြပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ နံဘေးနားကို မရောက် ရှိခင် သူတို့ရဲ့ မျက်စိရှေ့မှာပဲ ကလေးငယ်ဟာ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွား ပါတယ်။ လှမ်းခေါ်ခဲ့တဲ့ နေရာဆီကို ရောက်အောင်သွားကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ အရမ်း ထိန့်လန့် သွားပါတယ်။ အုတ်ဂူလေး တစ်ခုပါ။ အဲဒီအပေါ်မှာ သူတို့“ခေါစာ” ပြစ်ခဲ့တဲ့ လင်ဗန်း ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးလည်းယူဆောင်လာတဲ့ ကစားစရာ အရုပ်ကားလေး ကို အုတ်ဂူပေါ်မှာ တင်ပြီး ခပ်သုတ်သုတ် ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။
တရုတ်သင်္ချိုင်းအပေါက်ဝကို ပြန်ထွက်လာတော့ အလာမှာ ဌားစီးခဲ့တဲ့ကားနဲ့ ကားမောင်းသူကို တွေ့ရတာကြောင့် ကားဌားချင်ကြောင်းပြောပြီး ကားပေါ်သို့ တက်လိုက်ပါတယ်။ ကားပေါ်မှာ ဆယ်မိနစ်ကျော်ကျော် ထိုင်နေတဲ့ချိန်အထိ ကားမမောင်းတာကြောင့် ကားသမားကို ဘာဖြစ်လို့ မမောင်းသလဲဆိုပြီး မေးကြည့်လိုက်တော့ ကားသမားက“ဒီသင်္ချိုင်းဆီကို အလာမှာ ခင်ဗျားတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ အတူတူ ပါလာတဲ့ ကောင်လေးရော ပြန်မလိုက်တော့ဘူးလား ….”သူတို့နှစ်ဦး ကားတံခါးဖွင့်ပြီး ကားပေါ်ကနေ မပြေးရုံတမယ်ပြန်ဆင်းတော့မလို ဖြစ်သွားပြီးမှ ….“သူ ပြန်မလိုက်တော့ဘူး … လာခဲ့တဲ့နေရာကို အမြန်ဆုံး မောင်းပါ”
Credit - https://www.facebook.com/koye.yeye2013
တကယ်မသေခင် အစမ်း သေကြည့်ကြရအောင်
Posted by drmyochit Sunday, August 11, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
တကယ်သေလွန်ခါနီး အချိန်မှာ အာရုံဆိုး၊ နိမိတ်ဆိုးတွေ ထင်မြင်မလာဖို့ အတွက် မသေခင် ကတည်က ကိုတင် ပြင်ဆင် ထားဖို့လိုအပ် ပါတယ်။
တကယ်သေမယ့်အသေကြီးနဲ့ သေခါနီးအချိန်မှာ အာရုံကောင်း နိမိတ်ကောင်းတွေ ထင်မြင်နေဖို့ အတွက် အသေလေးနဲ့သေခါနီး အချိန်ကို အာရုံကောင်း နိမိတ် ကောင်းတွေနဲ့ထုံမွှမ်းပေးထားရ ပါမယ်။
ညအိပ်စက်တာဟာ အသေလေး နဲ့သေတာပါ။ညအိပ်တော့မယ်လို့ မျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် အာရုံကောင်းတွေ၊ကုသိုလ်အာရုံ တွေပဲ ထင်မြင်နေစေရပါမယ်။ကုသိုလ်အာရုံ ၄ မျိုးရှိပါတယ်။
ဒါနအာရုံ ။ သီလအာရုံ ။ သမထ အာရုံနဲ့ ဝိပဿနာအာရုံ တို့ဖြစ်ပါ တယ်။
တကယ်သေခါနီးအချိန်မှာ ဘယ် ကုသိုလ်အာရုံထင်လာမယ် ဘယ် ကုသိုလ်ကိုအာရုံယူလို့ရမယ်ဆို တာကြိုတင်မသိနိုင်တဲ့အတွက် အိပ်ခါနီးအချိန်မှာ ကုသိုလ်အာရုံ ၄မျိုးလုံးကိုယူထားရပါမယ်။
စနစ်တကျကြိုတင်လေ့ကျင့်ထား တာတောင်မှ တကယ့်တကယ် သေခါနီးကျတော့ ဘယ်ကုသိုလ် ကိုအာရုံ ယူရမှန်းမသိဖြစ်နေတတ် ပါတယ်။တကယ်လို့သိခဲ့ရင်တောင် မှအင်အားကြီးမားတဲ့ အစွဲလမ်း အာရုံတွေ အတွယ်တာအာရုံတွေ ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ကုသိုလ်အာရုံ ကို အာရုံယူဖို့ခက်ခဲနေတတ်ပါ တယ်။
ဒါ့ကြောင့် ညအိပ်ခါနီးအချိန်ကို တကယ်သေခါနီးအချိန်လို့သဘော ထားပြီး ကုသိုလ်အာရုံစွဲမြဲအောင် အလေးနက် ထားကြိုးစားကြရပါ မယ်။
၁။ ဒါနကုသိုလ်အနေနဲ့ ညအိပ်ရာ ဝင်ခါနီးတိုင်းဘုရားသောက်တော် ရေအသစ်လဲတဲ့အကျင့်စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ပေးပါ။ အိပ်ခါနီး (အသေလေး နဲ့သေခါနီး)ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးဒါနကု သိုလ်ဖြစ်လို့အာရုံယူရတာအလွန် လွယ်ကူပါတယ်။
၂။သီလကုသိုလ်အနေနဲ့ ညအိပ်ရာ ဝင်ခါနီးတိုင်း ငါးပါးသီလကိုအသစ် ခံယူဆောက်တည်ပါ။ဆောက်တည် ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီး မကျိုးပေါက် ပါစေနဲ့။ သီလယူပြီးတဲ့ အချိန်ကစပြီး ငါးပါးသီလလုံခြုံနေပြီလို့ဝမ်း မြောက် ဝမ်းသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ သမထကုသိုလ်အနေနဲ့ကိုယ် အနှစ်သက်ဆုံးဘုရားဂုဏ်တော် တခုခုကိုပွားများပါ။ဥပမာ- အရဟံ ဂုဏ်တော်ကိုနှစ် သက်ကြည်ညိုတယ်ဆိုရင် အရဟံ-ကိလေသာကင်းစင်တော် မူသောမြတ်စွာဘုရား။ အရဟံ-ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်၌ပင်မကောင်း မှုကိုပြုတော်မမူသော မြတ်စွာဘုရား။ အရဟံ-ပူဇော်အထူး ကိုခံယူ တော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရား။'' လို့အရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပါယ် ကိုအာရုံထင်မြင်အောင် စိတ်ထဲက နေနှလုံးသွင်းပွားများရပါမယ်။
နောက်တစ်ခုသမထအနေနဲ့ 'သတ္တဝါအားလုံးချမ်းသာပါစေ'လို့အနည်းဆုံး ၃ ခေါက်လောက် မေတ္တာဘာဝ နာပွားများနေရပါ မယ်။
၄။ နောက်ဆုံးဝိပဿနာကုသိုလ် အနေနဲ့ နှာသီးဝလေထိရာအရပ် မှာ သတိကပ်ထားပြီး လေဝင်ရင် ဝင်တယ် လေထွက်ရင်ထွက်တယ် ရှုမှတ်ပြီးနေပါ။လေဝင်လေထွက်တိုင်းထိတွေ့ တွန်းကန်မှုတွေကို သိနေ မယ်ဆိုရင် လောဘ ဒေါသစတဲ့ကိလေ သာတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရတော့ပါ ဘူး။
သမာဓိဥာဏ်ရင့်သန်ပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် အိပ်ရာဝင်မှာလေဝင် လေထွက်မှတ်ရင်းနဲ့ မဂ်စိတ်ကျပြီး နိဗ္ဗာန် ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်ပါ တယ်။
ညအိပ်တိုင်း ဒါနအာရုံ ။ သီလအာရုံ ။ သမထအာရုံ ။ ဝိပဿနာအာ ရုံတွေနဲ့အိပ်စက်သွားမယ်ဆိုရင် သေလွန်ခါနီးမှာလည်း အဲဒီအာရုံ ၄မျိုး တမျိုးမျိုးနဲ့သေလွန်ရမှာသေ ချာပါတယ်။
ကုသိုလ်အာရုံနဲ့သေ လွန်သွားသူကို ကောင်းရာသုဂတိ ဘုံတွေက လက်ကမ်းကြိုဆိုနေကြ မှာပါ။ဒါ့ကြောင့် ညအိပ်ရာဝင် ခေါင်းအုံး ပေါ်ခေါင်းချ ကျောဆန့်ပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် 'ငါခဏ သေလိုက်အုံးမယ် 'လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ထဲက ပြောပြီး သေနည်းလေ့ကျင်ကြဖို့ အထူးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မသေခင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ ထဲမှာ သေနည်းလေ့ကျင့်တဲ့အ လုပ်ကိုလည်း ထိပ်ဆုံးနေရာက ထည့်သွင်း ထားရပါမယ် ။
credit to Su Thandar.
Posted by drmyochit Sunday, August 11, 2013, under သတင်းများ | No comments
ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများထဲက မင်းသမီးချော Janie Tienphosuwan အိမ်ထောင်ပြု လိုက်ပါပြီ။ ဖူးစာ ရှင်က တခုလပ် နိုင်ငံရေးသမား တယောက်ပါ။ ဘန်ကောက်နားက စမွတ်ပရာကန်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Chonsawat Asavahame ဖြစ် ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက် ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးမှာ လက်ထပ်စာချုပ် ချုပ်လိုက်ကြပါပြီ။ တွဲလာတာတော့ ကြာပြီ ပေါ့ သတင်းထောက်တွေကို ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရာမှာတော့ လက်ထပ်စာချုပ်ကို ထုတ်ပြသလို မင်းသမီး ဗိုက်မကြီးသေးကြောင်း/ကိုယ်ဝန်မရှိကြောင်း ဆရာဝန်ဆေးစစ်ချက်လည်း ထုတ်ပြပါတယ် တဲ့။
မင်းသမီး ကိုယ်လေးလက်ဝန်ရှိနေကြောင်း မီဒီယာတခုမှာ ဖွခဲ့တာကို တန်ပြန်ချင်တဲ့သဘော ဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။
တခြားသူတွေကတော့ ကျမ မြင်သလိုမျိုး Mr Chonsawat ကို မြင်ကြမယ် မဟုတ်ဘူး။ ကျမ ထင်တာ ကတော့ သူက နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိတယ်၊ တည်ငြိမ်တယ်၊ သိုသိုသိပ်သိပ်ရှိတယ်၊ ဘာဆက်ဖြစ်မယ် ဆိုတာတော့ ကြည့်ရဦးမှာပေါ့ရှင်။ ကျမအတွက် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတိုင်းအတွက် သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံရေးသမားရဲ့ အရင်အိမ်ထောင်က ၅၃ နှစ်အရွယ် Nantida Kaewbuasai ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင် ဟောင်းနဲ့အတူမနေတာ ဆယ်နှစ်ကြာပြီ၊ ရခဲ့တဲ့သမီးတယောက်က အခုဆို အသက် ၁၈ နှစ် ရှိနေပါပြီ တဲ့။
ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာ သတင်းတပုဒ်မှာတော့ သူက နာမည်ကျော် မင်းသမီးတွေ ဘာတွေနဲ့ ချိန်းတွေ့ ခဲ့သူလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ... စွံတဲ့သူ၊ ပွေတဲ့သူ ဆိုပါစို့။
လာဘ်စားမှုတခုမှ မျက်ကွယ်ထောင်ဒဏ်ပေးခံရထားပြီး အခုတော့ အိမ်နီးချင်း ကမ္ဘောဒီးယားမှာ ခိုလှုံနေ တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
Posted by drmyochit Sunday, August 11, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
မိတ်ကပ် လိမ်းမထားပေမယ့် မျက်နှာ အသားအရေ ကြည်လင်ပြီး ကြည့်ကောင်း နေတယ် ဆိုရင် ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် အမြဲယုံကြည်မှု ရှိနေမှာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြ...ည်မှုရှိရှိ လှပကြည့်ကောင်း စေဖို့ အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို လိုက်နာ သင့်ပါတယ်။
အသားအရေ တင်းရင်းလှပစေဖို့ တစ်ညမှာ အိပ်ချိန် အနည်းဆုံး ရှစ်နာရှိသင့်ပါ။ ပြီးရင် ရေကို တစ်နေ့ ၅ - ၈ ဖန်ခွက်ခန့် သောက်ပါ။ ဒီနည်းလမ်း နှစ်ရပ်စလုံးဟာ မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက် အရေးကြောင်း မထင်ဖို့နဲ့ မျက်ကွင်းမညိုဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတာဟာ မိတ်ကပ်မပါဘဲ ကြည့်ကောင်းစေမယ့် အဓိကသော့ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာ အသားအရေ လှပကြည့်ကောင်းစေဖို့ အခြေခံ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းဖြစ် တဲ့ မျက်နှာကို မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး တစ်ကြိမ် သန့်စင်တာ၊ နေ့လိမ်းခရင်မ်၊ ညလိမ်းခရင်မ်လိမ်းတာ၊ အိုင်းခရင်မ်လိမ်းတာစတဲ့ နည်းတွေကို ပုံမှန်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ အသားအရေထိန်းသိမ်းရာမှာ ငွေကုန် ကြေးကျမများတဲ့ သခွားသီး၊ ပျားရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ လက်ဖက်အိတ်စတာတွေကို အသုံးပြုပြီး အသား အရေ ထိန်းသင့်ပါတယ်။
နေကာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်ကို နေ့စဉ်မှန်မှန် လိမ်းပေးပါ။ တိမ်ထူတဲ့ နေ့နဲ့ နှင်းကျတဲ့ နေ့တွေမှာလည်း ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအ ရေထိခိုက်မှု ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် နေကာ ခရင်မ်ကို လိမ်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ပြုံးလိုက်တာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ စိတ်ထားဟာ သင့် ပင်ကိုအလှကို ပိုမိုတောက်ပစေပါတယ်။
စစ်တွေမြို့ မင်းဂံရပ်ကွက်အတွင်းသို့ သံသယဖြစ်ဖွယ် ကုလားမနှစ်ဦးဝင်ရောက်
Posted by drmyochit Sunday, August 11, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
စစ်တွေမြို့နယ်၊ မင်းဂံရပ်ကွက်၊ အကွက် (၈)နှင့် (၉)အကြား(ဒွင်းမြောင်ရွာ) အတွင်းသို့ 10-8-2012 နေ့ ည (9း00)နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကုလားမနှစ်ဦးမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ဝင်ရောက်လာသဖြင့် မင်းဂံရပ် ကွက်သူ များမှ ၀ိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးရာ နှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး ကျန်တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီး ရမိပြီး မင်းဂံရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ၀င်ရောက်လာသည့် ကုလားမများမှာ ဒွင်းမြောင်ရွာမှတဆင့် မင်းဂံရပ်ကွင်းအတွင်း ရခိုင်သား များ၏ လုံခြုံရေးအခြေအနေများအား လေ့လာ စုံစမ်းရန်အတွက် သွားရောက်ရန် မဲပေါက်သဖြင့် လာရောက် ကြောင်းနှင့် အဆိုပါကိစ္စများအား ၄င်းတို့ ရွာမှ မော်လ၀ီ(၅)ဦးမှ ခိုင်းစေသဖြင့် လာရောက် ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ယခုကဲ့သို့ မင်းဂံအတွင်းသို့ မလာရောက်ခဲ့ပါက ၄င်းတို့မှာ မော်လ၀ီများ ထံတွင် အသတ်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း စခန်းတွင် ၀န်ခံပြောကြားခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးရမိသည့် ကုလားမအား ဖမ်းဆီး ခဲ့သည့် ဒေသခံမင်းဂံရွာသားများအနေနှင့် ရိုက်ပုတ်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် သူမမှာ ဘာမမှမဖြစ် သည့် အတွက် စိတ်အေးရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ရွာနှင့် နီးစပ်သည့် ကုလားရွာများမှ ကုလား များမှာ ယခုကဲ့သို့ လူခြေတိတ်ချိန်ညအချိန်တွင် အမြဲတမ်းဝင်ရောက်လေ့ရှိသဖြင့် ကုလားရွာများနှင့် ထိစပ်လျှက် ရှိသော မင်းဂံရွာသည် လုံခြုံရေးအခြေအရ အလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိသော အနေအ ထားတွင် ရှိကြောင်းသိရသည်။
From : ..RSV
ခလုတ်များကို နောက်ကျောတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် LG စမတ်ဖုန်းသစ်
Posted by drmyochit Sunday, August 11, 2013, under နည်းပညာ | No comments
LG ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် စမတ်ဖုန်းများတွင် ခလုတ်များကို ဖုန်းမျက်နှာပြင် ရှေ့ဘက်တွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည့် သမားရိုးကျ စိတ်ကူးကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ စမတ်ဖုန်းအသစ် G2တွင် ခလုတ်များသည် ဖုန်း၏နောက်ဘက်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ အစဉ်အလာဟောင်းကို တော်လှန်သော စိတ်ကူးဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် စမတ်ဖုန်းသည် အရွယ်အစား ကြီးမားလာလေလေ၊ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရန် ခက်ခဲလေလေ ဖြစ်လာတတ်သည့် စမတ်ဖုန်း နည်းပညာ အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်သွားစေသည်။ စမတ်ဖုန်းများတွင် Screenကျယ်ကျယ် နေရာပေးသည့်အခါ ခလုတ်များအတွက်ပါ သီးခြား နေရာပေးရခြင်းကြောင့် အရွယ်အစား ပို၍ကြီးသွားရသည်ကို LGက ယခုနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းလိုက်သည်။
(၅.၂)လက်မအရွယ် Screenဖြင့် ပွဲထွက်လာသော G2သည် Android OSဖြင့် မောင်းနှင်မည့် စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ဖုန်း၏ နောက်ဘက်မှ ခလုတ်များသည် အသံအတိုးအကျယ်၊ ကင်မရာအဖွင့်အပိတ်၊ Softwareအသုံးပြုမှု အစရှိသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည် ဖြစ်သည်။ ခလုတ်များကို နောက်ဘက်ပို့လိုက်ခြင်းသည် ဖုန်း၏ ရှေ့ဘက် ကင်မရာဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင်လည်း ပိုမိုလွယ်ကူ သွားစေမည်ဟု LGက ဆိုသည်။
"ဖုန်းရဲ့ အဓိက ခလုတ်တွေကို နောက်ဘက်ပို့လိုက်တဲ့အခါ ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူဟာ ပိုပြီးတော့ စိတ်ကြိုက် ထိန်းချုပ် အသုံးပြုလာနိုင်တယ်။ ခလုတ်တွေကို လက်ညှိုးရဲ့ ရွေ့လျားပုံကို သဘာဝကျကျ အခြေခံပြီး တပ်ဆင်ထားပါတယ်"ဟု LG၏ ဒီဇိုင်းပညာရှင် တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ "နောက်တစ်ချက်က ခလုတ်တွေကို နောက်မှာထားလိုက်တဲ့အခါ ဖုန်းပြောရင်း အသံအတိုးအကျယ်လုပ်လို့ ဖုန်းလွတ်ကျနိုင်ခြေကို လျော့နည်းသွားစေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုတေသန ရလဒ်တွေက ဖော်ပြထားတယ်"ဟုလည်း ၎င်းက ရှင်းပြခဲ့သည်။
LGသည် ယခုအခါ Huaweiကို ကျော်ဖြတ်ကာ ကမ္ဘာ့စမတ်ဖုန်း ရောင်းချမှု ဈေးကွက်နယ်ပယ်တွင် တတိယ အကျယ်ပြန့်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် ပထမ(၃)လအတွင်း LG၏ Nexus 4နှင့် Optimus အမျိုးအစား ဖုန်းများသည် ဈေးကွက် ဝယ်လိုအား တိုးပွားလာခြင်းက LGအတွက် အားတက်စရာ ဖြစ်လာကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းလုံခြုံရေး စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ဖို့ ဘင်္ဂါလီများ တောင်းဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ခိုလုံနေသော ဘင်္ဂါလီများမှ အစိုးရလုံခြုံရေးများကို အလို မရှိပဲ တပ်မတော် သားများဖြင့် အစားထိုးပေးရန် ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်များက တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ယခင် နစက များကို ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် အစိုးရမှ လုံထိန်းများကို အစားထိုးခန့်ထားခဲ့ရာ လုံထိန်းများ နှင့် ဒုက္ခသည်များ အကြား ပြဿနာများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လုံထိန်းများ၏ အတွေ့အကြုံနုနယ် မှုကြောင့် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ နှင့်သာမက ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များနှင့်ပါ အမြဲလိုလို အဆင်မပြေဖြစ် လျှက် ရှိသည့် အပြင် နယ်စပ်စည်းလည်း မလုံမခြုံ ဖြစ်နေသဖြင့် ယခင်ကဲ့သို့ စစ်တပ်အပြည့်အဝ တာဝန် ယူ အုပ်ချုပ်မှုကို လိုလားနေကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရှော့ပင်းစင်တာ ဆောက်လုပ်ငန်းရေး လုပ်ငန်းခွင်အား သြဂုတ် ၁၀ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - အောင်မျိုးသန့်)
ရွှေတိဂုံစေတီတော် ကန့်သတ်ဧရိယာထဲတွင် ပါဝင်နေသည့်အပြင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်နှင့် နီးကပ်နေသည့် အများပြည်သူ အပန်းဖြေရာ နေရာဖြစ်သော ပြည်သူ့ရင်ပြင်အတွင်း ဆောက်လုပ်ခွင့် မပြုသင့်သည့် ရှော့ပင်းစင်တာ တစ်ခုကို ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုထားရာ ယခုအခါ ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ခန့် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ ရှော့ပင်းစင်တာကို ပြည်သူ့ရင်ပြင်အတွင်း ကစားကွင်းများ အပန်းဖြေနေရာများကို ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားသည့် သဘာဝဥယျာဉ် (Natural World) ကုမ္ပဏီမှ ဆောက်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက ဆောက်လုပ်ခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သုံးထပ်အဆောက်အအုံ အလျား ၁၈၆ မီတာ၊ အနံ ၄၂ မီတာကျယ်ဝန်းပြီး ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ အနောက်ဘက်မုခ်မှဆင်းလျှင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဦးဝိစာရလမ်းရှိ ပြည်သူ့ရင်ပြင် အပေါက်ဝင်ဝင်ချင်း နေရာ၌ ဆောက်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ကာ မြန်မာမှုလက်ရာများကို အဓိကထား ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်သို့လာသော နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည့်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် အဓိက ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ရှော့ပင်းစင်တာကို လာမည့်ပွင့်လင်းရာသီတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ရှော့ပင်းစင်တာ ဆောက်လုပ်နေသည့် နေရာမှာ အများပြည်သူပိုင် ပန်းခြံဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ စိမ်းလန်းမြေဧရိယာ (Green Area) အတွင်း ဖြစ်နေသည့်အပြင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွင် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ကန့်သတ်ဧရိယာအတွင်း ဖြစ်နေကြောင်း၊ ရွှေတိဂုံစေတီတော် ကန့်သတ်ဧရိယာအတွင်း ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြလာသည့် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ နှစ်လုံးအား ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်နည်းတူ ယခုရွှေတိဂုံစေတီတော်နှင့် နီးကပ်သည့် နေရာတွင် ယခုလို ရှော့ပင်းမောလ်မျိုးဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်သုံးသပ်နေကြသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ "ပန်းခြံဆိုတာ အပန်းဖြေတဲ့ နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီမှာ စားသောက်ဆိုင်တော့ ဖွင့်လို့ရတယ်။ စားသောက်ဆိုင် ဆိုရာမှာလည်း သေးသေးမွှားမွှားလေးတွေ ပုံစံမျိုးကို ပြောတာပါ။ အခိုင်အခန့် အကြီးကြီး ဆိုရင်တော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ပန်းခြံဆိုတာမျိုးက သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တာ များရမယ်။ လူတွေလုပ်တဲ့ Structure နည်းရမယ်။ အခုလို ပြည်သူ့ရင်ပြင်ထဲမှာ ရှော့ပင်းစင်တာကြီး ဆောက်တာက မဆောက်သင့်ဘူး။ ဆောက်ချင်ရင် အများပိုင်ပန်းခြံမှာ မဟုတ်ဘဲ သူ့ဟာသူ ပုဂ္ဂလိကပိုင် မြေပေါ်မှာပဲ ဆောက်သင့်တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ဆောက်တဲ့ နေရာက ရွှေတိဂုံစေတီတော် ခြေတော်ရင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွှေတိဂုံစေတီတော် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြေအသုံးချမှုတွေကို အများကြီး စိစစ်သင့်နေပါပြီ" ဟု ရန်ကုန်မြို့ပြ အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မို့မို့လွင်က သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
"ဒီရှော့ပင်းမောလ်ကြီးက ခွင့်မပြုသင့်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအဆောက်အအုံကြီးက ပြည်သူ့ရင်ပြင် ထဲကနေတောင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို ဖူးမြော်ကြည်ညိုရတဲ့ မြင်ကွင်းကို ပိတ်ဆို့နေပါပြီ။ ပြီးတော့ အများပြည်သူပိုင် ပန်းခြံထဲမှာ ဒါမျိုးမဆောက်သင့်ပါဘူး။ ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ ခွင့်ပြုခဲ့သလဲဆိုတာ မွေးခွန်းထုတ်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ထဲမှာ အများပြည်သူ အပန်းဖြေတာနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အရက်ဘီယာတွေ ရောင်းချတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေလည်း အများအပြား ဖွင့်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်" ဟု ရန်ကုန်မြို့ပြ ပညာရှင် တစ်ဦးက ထောက်ပြခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်အတွင်း အဆိုပါ ရှော့ပင်းစင်တာ ဆောက်လုပ်သည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီတွင် ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး တစ်ခုတွင် အဖွဲ့အစည်း တချို့မှ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှု အချို့ပင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟုလည်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရှော့ပင်းစင်တာကို ဆောက်လုပ်သည့် Natural World အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီသုံးခုမှာ ဧက ၁၀၀ ကျော် ကျယ်ဝန်းသည့် ပြည်သူ့ရင်ပြင် ဧရိယာတစ်ခုလုံး၏ ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ ကျော်ကို ငှားရမ်းလုပ်ကိုင် နေခြင်းဖြစ်ပြီး Natural World ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဒီနေ့ နေ့လည်က လှည်းတန်းမှာ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ခြောက်လွှာ တိုက်ခန်းပေါ်က ခုန်ချဖို့ ကြံစည်နေပုံ။ (ဓာတ်ပုံ- Chit Nay Mrell)
ဥရောပတွင် အစွန်းရောက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရန်နှင့် ဘမ္ဘာတစ်ဝန်း နိုင်ငံများတွင် ဒုက္ခပေးနေသော ဂျီဟတ်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရန် နိုင်ငံတွင်းရှိ အစွန်းရောက် အီမမ် (မူဆလင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်) အများ အပြားကို နှင်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြစ်သစ်က ပြောသည်။ လာမည့် ရက်များ အတွင်း အဆိုပါအီမမ်များအား ပြည်တွင်းမှ နှင်ထုတ်သွားမည်ဟု ပြစ်သစ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက သတိပေးပြောကြားသည်။
အမျိုးသမီးများကို မတရားသဖြင့် ရှုတ်ချဝေဖန် အပုပ်ချပြီး မိမိတို့၏ တန်ဖိုးထားမှုများနှင့် ဆန့်ကျင်သော သဘော ထား အမြင်များ ကိုင်ဆွဲသည့် ပြင်ပတရားဟောဆရာများဖြစ်သော အဆိုပါ မူဆလင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် များ အားလုံးကို နှင်ထုတ်သွားမည်ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြောကြားချက်ကို အေအက်ဖ်ပီက ကိုးကားဖော်ပြသည်။
ဗရပ်ဆဲတွင် ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတကာ ကွန်ဖရင့်တစ်ရပ်၌ စကားပြောရာတွင် ပြစ်သစ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကို ပြည်တွင်းမှ နှင်ထုတ်သည့် ယခုလုပ်ဆောင်ချက်မှာ နိုင်ငံရေးဖြစ် စဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော Salafist အုပ်စုဖွဲ့မှုများကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားသည်။ Salafist အသင်းအဖွဲ့များ၏ ရည်ရွယ်ချက်က ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းများကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန်ဖြစ်သည်ဟု ဝန်ကြီးက ဆိုသည်။
ဘယ်ဂျီယမ်တွင်ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတကာကွန်ဖရင့်၏ အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သော အစွန်းရောက် အစ္စလာမ် (Radical Islam) သည် ပြစ်သစ်အတွက် အပူတပြင်း အရေးတကြီးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေသည်။ ပြင်သစ် သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ မုန်းတီးရေးစကား ဟောပြောမှုနှင့် ပြင်သစ်၏ တန်ဖိုးထားမှုများကို ဆန့်ကျင်ဟောပြောမှု၊ အနောက်ဆန့်ကျင်ရေးခံယူချက်သဘောထားများ ဟောပြောမှုတို့ကြောင့် မွတ်ဆ လင် အီမမ်အမြောက်အများကို ပြင်သစ်က မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း နိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဆီးမိုက်ဆန့်ကျင်ရေးသဘောထားအမြင်များ ဟောပြောဖြန့်ဝေမှု၊ အမျိုးသမီးများအပေါ် မတရားသဖြင့် ရှုတ်ချဝေဖန်မှုနှင့် ပြင်သစ်မြို့တော်ပါရီရှိ Omar Mosque ဗလီ၏ တရားဟောစင်မြင့်ထက်မှနေ၍ အကြမ်း ဖက်ဂျီဟတ် (မွတ်ဆလင်ဘာသာရေးစစ်ပွဲ) ဆင်းနွှဲရန် တိုက်တွန်းမှုတို့အတွက် တူနီးရှား အီမမ်တစ်ဦးကို ပါရီက အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ တွင် နိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။
ပြစ်သစ်သည် ဧပြီ ၂၀၁၂ တွင်လည်း အစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွနှင့် မွတ်ဆလင်တရားဟောဆရာ (၅) ဦးကို နိုင်ငံမှ နှင် ထုတ်ခဲ့သည်။ မာလီဇာတိ မွတ်ဆလင်တရားဟော ဆရာတစ်ဦးမှာ ဆီးမိုက်ဆန့်ကျင်ရေး အားပေး အားမြှောက်လုပ်မှု၊ မျက်နှာအပြည့်မျက်နှာလွှာဇာဖုံးအုပ်ခြင်းကို ထောက်ခံအားပေးမှုနှင့် အနောက်နှုန်း စံများအား ငြင်းပယ်ခြင်းတို့အတွက် ပြစ်သစ်မှနှင်ထုတ်ခံရသည်။
ဗီယက်နမ်နှင့် အမေရိကန် စစ်ပွဲကြီး ပြီးသွားသည်ကို မသိပဲ တောနက်ထဲမှာ ပုန်းအောင်းနေခဲ့သည့် သားအဖ နှစ်ဦး၊ နှစ်ပေါင်း (၄၀)ကြာမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိ
အမေရိကန်များ စစ်ရှုံးပြီး ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲနိုင်ခဲ့သည့် သတင်းကို မသိနိုင်လောက်အောင် အပုန်းကောင်း ခဲ့သော သားအဖနှစ်ဦး နှစ်ပေါင်း (၄၀) ကြာမှ တော်နက်ထဲမှ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။...
တွေ့ရှိတဲ့ အချိန်မှာ အဖေက အသက် (၈၂)နှစ်ရှိနေပြီး သားက အသက် (၄၁)နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့သားအဖနှစ်ဦးကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ကမှ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အလည်ပိုင်း Ho Van Lang က (၄၀) ကီလိုမီတာလောက် ဝေး တဲ့ တောနက်ထဲမှာ ရွာသားတွေက တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖခင်ဖြစ်သူဟာ လူမျိုးစု စကားကို သာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သားဖြစ်သူကတော့ စကားလုံးအနည်းငယ်ကိုပဲ သိပါတယ်။
ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ပြောကြားချက်အရ စစ်ပွဲကြောင့် ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ သူ့အိမ်မှာ ဗုံးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး သူ့ဇနီး ဖြစ်သူနဲ့ ကလေးနှစ်ဦး သေ ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ဒီသားအဖနှစ်ဦးဟာ စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး တောနက်ထဲမှာ တာဇံတွေလို သစ်ပင်ပေါ် မှာ အိမ်ဆောက်ပြီး သီးပင်စားပင်များကို စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အမဲလိုက်ခြင်း တွေလုပ်ပြီးနေ ထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီသားအဖနှစ်ဦးဟာ ကမ္ဘာနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ပြီး နေ ထိုင်ခဲ့ကြာတာပါ။
အ၀တ်အစားတွေကိုတော့ သစ်ခေါက်တွေကို ယက်လုပ်ဖန်တီးပြီး ၀တ်ဆင်ထားတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ သစ်ခေါက်အင်္ကျီ အသစ်တစ်ခုကိုလဲ ပြုလုပ်ထားတာကို လဲတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
တွေ့ရှိချိန်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ အလွန်အားနည်းပြီး ပိန်လှီနေသည့်အတွက် တောတွင်းကနေ ထမ်းစင်နဲ့ သယ်ယူခဲ့ပြီး အခုတော့ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူလျှက်ရှိပါတယ်။
အခုတော့ သားအဖနှစ်ဦးကို ဒေသခံနဲ့ အာဏာပိုင်တွေဟာ တောတွင်းကို ပြန်ပြေးမသွားနိုင်အောင် စောင့်ကြည့် နေရပါတယ်။
စစ်တွေတွင် ဘင်္ဂလီနှင့် ရဲ ပဋိပက္ခ အစိုးရ ပြန်ကြားရေး ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်
Posted by drmyochit Sunday, August 11, 2013, under ထုတ်ပြန်ချက် | No comments
စစ်တွေမြို့နယ် အုန်းတောကြီးကျေးရွာအနီးတွင် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ဘင်္ဂလီ အမျိုး သမီးတစ်ဦး သေဆုံးနေသည်ကို တာဝန်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက တွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့် အဆိုပါသေဆုံးနေသည့် အလောင်းကို စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန် သယ်ယူလာပြီး ၄င်းအလောင်းကို စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေစဉ် အတွင်း ဘင်္ဂလီ များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များတို့ ရုန်းရန်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားရာကနေ ဘင်္ဂလီတချို့ ဒဏ်ရာရ ရှိသွားကြောင်း မြန်မာ အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။
စစ်တွေမြို့ ညမထွက်ရအမိန့် ညဆယ်နာရီမှ နံနက် လေးနာရီအထိထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်ကို နောက်ထပ် ရက်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကို သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးလိုက်ကြောင်း သိရ သည်။ (ဓါတ်ပုံမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခအတွင်းက တာဝန်ကျ ရဲလုံထိန်းများကိုတွေ့ရပုံ။ ဓါတ်ပုံ- အင်တာနက်)
စစ်တွေမြို့ ညမထွက်ရအမိန့် ညဆယ်နာရီမှ နံနက် လေးနာရီ အထိထုတ်ပြန် ထားသော အမိန့်ကို နောက်ထပ် ရက်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကို သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ (ဓါတ်ပုံမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခအတွင်းက တာဝန်ကျ ရဲလုံထိန်းများကိုတွေ့ရပုံ။ ဓါတ်ပုံ- အင်တာနက်)
စစ်တွေမြို့နယ်၌ အလောင်းတစ်လောင်း တွေ့ရှိရာမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များအား အကြမ်းဖက်မှု အချို့ ပြုလုပ်လာ ခဲ့သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာက ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင် ရခုိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ် မှန်စီကျေးရွာ မှန်စီချောင်းဝတွင် အလောင်း တစ်လောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ အလောင်းအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက မှုခင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများက လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း၊ ကြည့်ရှုသူအင်အား ၅၀၀ ခန့်ဖြစ်လာသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လူစုခွဲရန် ပြောကြားစဉ် အာလန် (၁၆ နှစ်) က ဒုတိယ ရဲမှူးဌေးဝင်းအား ဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း၊ ကျန်လူများကလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ရန်ပြုခဲ့ကြသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရော်ဘာကျည်ဖြင့် သတိပေးပစ်ခတ်တားဆီးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပစ်ခတ်လူစုခွဲမှုကြောင့် သုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော်လည်း စိုးရိမ်ဖွယ် မရှိကြောင်း၊ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားသော လူအုပ်စုများက အုန်တောကြီး ရဲကင်းအား မီးရှို့ခဲ့သဖြင့် ယာယီလူနေတဲလေးလုံး မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးသူ ရှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
သြဂုတ်လ ၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ဘုမေကျေးရွာအုပ်စု ကော်ကာဒီရွာနှင့် သုံးဖာလုံခန့် အကွာ ပင်လယ်ဝတွင် ငါးဖမ်းလှေတစ်စင်း နစ်မြှုပ်ခဲ့ရာ လှေပေါ်ပါသူ ဘင်္ဂါလီ ခုနစ်ဦးအနက် အဒူရော်ရှိ(၃၄ နှစ်) ဆိုသူ တစ်ဦးပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်း ၊ ယခုတွေ့ရှိရသော အလောင်းမှာ ရေနစ်သေဆုံးသော အလောင်းဖြစ်နိုင်သဖြင့် အတည်ပြုနိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နေရာအနီးရှိ ဘောဒူဖရွာတွင် စုဝေးနေသော လူအုပ်စုအား ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့နှင့်အတူ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး(UNHCR) အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
၂၀၁၃ မြန်မာလိဂ်ဘောလုံးရာသီ၏ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်သည့် နေပြည်တော်-ရန်ကုန် ပွဲစဉ်တွင် ရမ်းကား ခဲ့သော ပရိသတ်အချို့အနက် ၁၂ ဦးကို စတင်ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အမှတ်(၅)ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက တရားလိုပြုလုပ်ပြီး တိုင်ကြားချက်အရ အားကစားကွင်းထိုင်ခုံများအား ဖျက်ဆီးခဲ့ရာ တွင် ပါဝင် ပတ်သက် ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည့် ပရိသတ် ၁၂ဦးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပ ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက သြဂုတ်လ ၈ရက်တွင်ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးသူများကို ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၆(၁)အရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဖျက်ဆီးမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ဆက်လက်စုံစမ်းအရေး ယူသွားရန်ရှိကြောင်း ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ အမှတ် (၅)ရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
အဆိုပါပွဲစဉ်တွင် နှစ်ဖက်အသင်းမှ အုပ်ချုပ်နည်းပြအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကစားသမားများ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှု များလည်း ရှိခဲ့ကြသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီအနေဖြင့် အဆိုပါပွဲစဉ်တွင် တာဝန်ယူခဲ့သည့် ပြိုင်ပွဲကြီးကြပ်သူ၊ ဒိုင်လူကြီးများ၏ အစီရင်ခံစာမှတ်တမ်းများ၊ ရုပ်သံမှတ်တမ်းများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ မကြာမီရက်ပိုင်း အတွင်း အရေးယူမှုများပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လန်ဒန် - ဤအမှုသည် အမျိုးသမီးပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်အား မတရား ပြုကျင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မတော်မ တရား ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုကျင့်ခဲ့သော ဥရောပ၏ အကြီးမားဆုံးနှင့် မကောင်းဆိုး ဝါး သဖွယ် ပြုကျင့်ခဲ့သူ၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ တရားခံ ဂျိုးရဂ်အား ယခုမတ်လတွင် ဒီအင်န်အေနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကာ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ပြီးနောက် စီရင်ချက်ချမှတ်ရန် ရုံးချိန် ပေါ်ထားသော အမှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။
သားသမီး မရှိခြင်းကို စိတ်ပျက်စရာဟုမထင်ကြောင်း အနစ္စ...
ကားမောင်းစဉ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ပြောဆိုမှုနှင့် ယာဉ်မ...
စစ်တွေမြို့ မင်းဂံရပ်ကွက်အတွင်းသို့ သံသယဖြစ်ဖွယ် က...
ခလုတ်များကို နောက်ကျောတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် LG စမတ်ဖု...
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းလုံခြုံရေး စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ဖို့ ဘ...
အစွန်းရောက် မွတ်ဆလင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအား ပြစ...
စစ်တွေတွင် ဘင်္ဂလီနှင့် ရဲ ပဋိပက္ခ အစိုးရ ပြန်ကြားရေး...
အမျိုးသမီး ၁၀၀၀ ကျော်အား အဓမ္မကျူးလွန်သူ ဖမ်းဆီးရမိ...